Diaben'ny Amerikanina Latina - Ny Diabe Manerantany
Home » Diaben'ny Amerikanina Latina
ny Diabeta marolafy marolafy sy kolontsaina amerikana faha-1 ho an'ny tsy herisetra
"Tsy misy herisetra amin'ny volana martsa amin'ny alàlan'ny Amerika Latina"
Ny vahoaka amerikanina latina sy karaiba, ny vazimba teratany, ny afro ary ny mponina ao amin'ity faritany midadasika ity, dia mifandray, manetsika ary mandroso, handresena ireo karazana herisetra isan-karazany ary hanangana ny firaisana amerikanina latina ho an'ny fiaraha-monina mirindra sy tsy mahery setra.
Mpikatroka, vondrona, fikambanana sosialy, andrim-panjakana sy tsy miankina, sekoly, oniversite, nanolo-tena tamin'ity hetsika tsy misy herisetra amerikana latina ity.
Fanatanterahana hetsika mialoha sy mandritra ny volana martsa amin'ny hetsika virtoaly sy mifanatrika amin'ny firenena tsirairay, toy ny diabe, hetsika ara-panatanjahantena, diabe isam-paritra na eo an-toerana; fampiroboroboana fihaonambe, latabatra boribory, atrikasa fanaparitahana, fetibe ara-kolontsaina, lahateny, na hetsika famoronana manohana ny Nonviolence, sns. Hanao dinika sy fikarohana momba ny hoavin'i Amerika Latina izay tianay hatsangana ihany koa.
Amin'ny fomba ahoana?
Te-hiara-miasa aminay ve ianao?
1- Manao tatitra sy manova ny karazana herisetra rehetra misy eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika: ara-batana, miralenta, am-bava, ara-tsaina, ara-toekarena, ara-pirazanana sy ara-pinoana.
2- Mampiroborobo ny tsy fanavakavahana sy ny tombontsoa mitovy ary ny fanafoanana ny visa eo amin'ireo firenena ao amin'ny faritra.
Tanàna tany am-boalohany
3-Manamarina ny Vazimba Teratany manerana an'i Amerika Latina, manaiky ny zon'izy ireo sy ny anjara birikin'ny razany.
4 -Ampahafantaro ny krizy ekolojika miaro ny harena voajanahary. Tsia ho an'ny fitrandrahana mega ary tsy hisy bibikely intsony amin'ny voly. Fidirana tsy voafetra amin'ny rano ho an'ny olombelona rehetra.
Avelao ny ady
5- Ny fandavan'ny fanjakana araka ny lalàm-panorenana ny fampiasana ady ho fomba iray hamahana ny fifanolanana. Fampihenana miandalana sy ampitahaina ny fitaovam-piadiana mahazatra.
Tsia mankany amin'ny toby miaramila
6- Lazao ny tsia amin'ny fametrahana tobin-tafika vahiny ary mitaky ny famongorana ireo efa misy.
Mandrosoa ny sonia TPAN
7- Mampiroborobo ny fanaovan-tsonia sy fanajana ny fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary (TPAN) manerana ny faritra.
Ataovy hitan'ny maso fa tsy misy herisetra
8- Manaova hetsika tsy misy herisetra hita ho an'ny fiainana any amin'ny faritra.
Maniry mafy izahay hitety ny faritra hanamafisana ny firaisana amerikanina latina anay ary hanangana ny tantarantsika iraisana, amin'ny fitadiavana fihaonana, fahasamihafana ary Nonviolence.
Teo anelanelan'ny 15 septambra 2021, Bicentennial of the Independence of Central American firenena ary amin'ny 2 Oktobra, Andro Iraisampirenena tsy fananan-kery.
"Mifandraika amin'ny tsara indrindra amintsika tsirairay avy, mamorona fahatsiarovan-tena fa IZAO, amin'ny alàlan'ny fandriampahalemana sy ny fanjakana ihany, dia ahoana no hisokafan'ny SPECIES ho an'ny ho avy"